ဟိုအရင်အချိန် အနုပညာလော ကကို စဝင်ခဲ့စဉ်က အမိုက်စား ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို ပရိသတ်ကြီးအားပြသလိုက်တဲ့ မင်းသား ဘုန်းလျှံ – Shwe Likes
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော ဘုန်းလျှံ ကေ တာ့ အရပ်ြ မင့်မြင့်နဲ့ယောကျာ်းပီသတဲ့ ရုပ်ရည်ကိုပိုင် ဆိုင်ထား တဲ့ မင်းသား တစ်လက်ပါ။ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်​​ဆောင် ချက်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ် ကာရိုက်တာေ တွမှာလည် းပိုင်နိုင်လွ န်းတဲ့ သူ့ကိုတော့ ဗီဒီယိုဇာ တ်လမ်းတွဲတွေ ခေတ်ထဲက အားပေးခဲ့ကြ တဲ့ပရိသ တ်တွေဟာ အခုချိန်ထိပါ ပဲနော်။
အခုချိန် မှာလည်း အိမ်ထောင်သ ည်ဘဝကိုချစ်ဇနီးေ ချာလေးနဲ့အတူ ဖြတ် သန်းကာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိ မ်ထောင်ရေးကို ​ပိုင်ဆိုင် ထားသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့” 2000 တုန်း ကပုံလေး.ပထမဆုံး photo shotting. 😊လူသားအားလုံး အကုသို လ်ကင်း၍ကု သိုလ်တရား ပွားများနို င်ကြပါစေ🙏🙏🙏”ဆိူတဲ့ စာလေးနဲ့လွန် ခဲ့တဲ့၂၁နှစ် က စတင်ပြီးphoto shottingပြုလု ပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးကို တင်လာ ခဲ့တာ​ပါ။
ချစ်တဲ့ပရိသ တ်တွေလည်း ဘုန်းလျှံရဲ့အနု ပညာအစက ဝအမိုက် စားဓာတ်ပုံလေး ကို ကြည့်ပြီး သဘော ကျနေကြတာပဲ ဖြ စ်ပါတယ်။
အ ကုသိုလ်ကင်း ၍ကုသိုလ်တရားပွား များနိုင်ကြဖို့ဆုတောင်းေ ပးခဲ့တဲ့ဘုန်းလျှံရဲ့ဆုတောင်းလေးအ တိုင်းပရိသတ်တွေလည်း ပြည့်ပါစေနော်။ Credit:CeleGabar
သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာ ဘုန္းလၽွံ ေက တာ့ အရပ္ျ မင့္ျမင့္နဲ႔ေယာက်ာ္းပီသတဲ့ ႐ုပ္ရည္ကိုပိုင္ ဆိုင္ထား တဲ့ မင္းသား တစ္လက္ပါ။ ပီျပင္တဲ့ သ႐ုပ္​​ေဆာင္ ခ်က္နဲ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္ ကာရိုက္တာေ တြမွာလည္ းပိုင္နိုင္လြ န္းတဲ့ သူ႔ကိုေတာ့ ဗီဒီယိုဇာ တ္လမ္းတြဲေတြ ေခတ္ထဲက အားေပးခဲ့ၾက တဲ့ပရိသ တ္ေတြဟာ အခုခ်ိန္ထိပါ ပဲေနာ္။
အခုခ်ိန္ မွာလည္း အိမ္ေထာင္သ ည္ဘဝကိုခ်စ္ဇနီးေ ခ်ာေလးနဲ႔အတူ ျဖတ္ သန္းကာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အိ မ္ေထာင္ေရးကို ​ပိုင္ဆိုင္ ထားသူပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့” 2000 တုန္း ကပုံေလး.ပထမဆုံး photo shotting. 😊လူသားအားလုံး အကုသို လ္ကင္း၍ကု သိုလ္တရား ပြားမ်ားနို င္ၾကပါေစ🙏🙏🙏”ဆိူတဲ့ စာေလးနဲ႔လြန္ ခဲ့တဲ့၂၁ႏွစ္ က စတင္ၿပီးphoto shottingျပဳလု ပ္ခဲ့တဲ့ပုံရိပ္ေလးကို တင္လာ ခဲ့တာ​ပါ။
ခ်စ္တဲ့ပရိသ တ္ေတြလည္း ဘုန္းလၽွံရဲ့အႏု ပညာအစက ဝအမိုက္ စားဓာတ္ပုံေလး ကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာ က်ေနၾကတာပဲ ၿဖ စ္ပါတယ္။
အ ကုသိုလ္ကင္း ၍ကုသိုလ္တရားပြား မ်ားနိုင္ၾကဖို႔ဆုေတာင္းေ ပးခဲ့တဲ့ဘုန္းလၽွံရဲ့ဆုေတာင္းေလးအ တိုင္းပရိသတ္ေတြလည္း ျပည့္ပါေစေနာ္။ Credit:CeleGabar
အချိန်အခါမသိ လူကမွေးပီးလူလိုမသိဘဲနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ အဆိုတော်မူးလာ
အကျႌဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ အရောင်းစာရေး ကောင်မလေးတွေရှေ့မှာ အရှက်ဗြန်းဗြန်းကွဲခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ သားညီ